MTZ-892: DABEECADAHA IYO SIFOOYINKA FARSAMADA - MISHIINADA GAARKA AH
Maanta, beeraha waxay joogaan heer sidaas oo kale ah oo aan horay u suura galin in ay sameyso iyadoon soo jiidin qalab gaar ah. Kuwa ugu caansan waa noocyo kala duwan oo cagaf ah, kuwaas oo loo isticmaali karo hal nooc oo shaqo ah, isla markaasna dhowr ah. Aynu ka fekerno sharaxaad ka mid ah tiknoolajiyada MTZ ee 892, tayada ay leedahay.
Ma taqaanaa? Gawaarida ugu horeeya waxay u muuqatay qarnigii XIX, xilligaasi waxay ahaayeen wax-qabad. Mashiinka, oo ka shaqeeyay alaabta batroolka, ayaa loogu talagalay 1892 gudaha Maraykanka.
MTZ-892: sharaxaad gaaban
Dhaqdhaqaaqa MTZ-892 (Belarus-892) waa shey caadi ah oo ka mid ah Plant Traktor Plant. Waxay ka mid tahay habka caalamiga ah oo leh ujeedo kale oo beeraha ah, suuqa oo farsamadani waxa ay heleen xaalad ah "shaqeeye" oo xoog leh oo aan adageyn.
Si ka duwan qaabka aasaasiga ah, waxay leedahay wax badan mashiinka awoodda badan leh, gawaarida waaweyn iyo qalabka loo yaqaan "gearbox". Faa'iidada ugu weyn waxay tahay in kharashka hawlgalku hooseeyo, farsamoyaqaanku muujiyay waxqabad aad u sarreeya iyo waxtarka.
Qalab tiknoolajiyadeed oo caalami ah
Si loo isticmaalo mishiino kasta oo ku shaqeeya heer sare oo isku mar ah inay noqdaan kuwo amaan ah, waa in ay leeyihiin waxyaabo gaar ah. Tixgeli sifooyinka gawaarida "Belarus-892":
Warshadda tamarta. MTZ-892 waxaa lagu qalabeeyaa mishiin 4-bylinder ah oo leh gaaska dabaysha D-245.5. Awoodda cutubkan - 65 kiiloomitir. Mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa qaboojinta biyaha. Xilliyada ugu sarreysa, isticmaalka shidaalka aan ka badnayn 225 g / kWh. 130 litir oo shidaal ah ayaa lagu shubi karaa haanta shidaalka.
Waa muhiim! Wixii shaqo ah ee gobollada waqooyi ee dalka, baabuurta waxaa la siiyaa nidaam bilow ah qabow. Qalabkan waxaa lagu dhejin karaa optionally, wuxuu bilaabayaa makiinada ugu muhiimsan ee leh aerosol dabaysha.
Chassis iyo gudbin. MTZ-892 - gawaarida leh wadajir gawaarida. Kala duwanaansho ayaa lagu rakibay gawaarida hore. Mashiinku wuxuu leeyahay 3 boos oo shaqeynaya: on, off and automatic. Goobidda dhulka - 645 ml. Gawaarida gadaal ayaa la labalaabi karaa. Qalabka noocan oo kale ah ayaa kor u qaada iyo xasilloonida Isku-darka ayaa la isu-duubay: is-gaarsiinta gacanta, qalabaynta, jabsashada iyo daboolka dambe. Waxay si weyn u horumarinaysaa awoodaha MTZ ee tiknoolajiyada MTZ 892 10-gawaarida xawaaraha, taas oo dhamaystiraysa gawaarida. Mashiinka waxaa lagu qalabeeyaa 18 waji hore iyo 4 hababka dambe. Xawaaraha ugu sareeya ee wata gawaarida socodka waa 34 km / h. Fekerku waa nooc laba qalab oo qalalan. Mashiinka tamarta wuxuu ku shaqeeyaa qaabab kala duwan oo madax banaan.
Cabin Meesha shaqada ee mashiinkani waxay u hoggaansameysaa heerarka caalamiga ah ee raaxada iyo ammaanka. Qolka waxaa loo qaabeeyay qalab adag iyo muraayadaha ammaanka. Waad ku mahadsan tahay daaqadaha dusha sare ee darawalku leeyahay dareewalku waa muuqaal weyn. Wixii shaqo ah ee nidaamka kuleylka qabow ku xiran. Kursiga darawalku wuxuu ku qalabaysan yahay taakuleeyn dib loo habeyn karo. Xakamaynta isugeynta kumbuyuutarka ayaa fududeynaya maareynta mashiinka.
Mashiinka MTZ-892 waxaa lagu qalabeeyaa mishiin 700 W. Iyadoo naqshadahani, koronto-dhaliyuhu wuxuu ku shaqeeyaa iyada oo aan ku lug laheyn bateriga. Qalabaynta waxaa lagu daraa wareegga.
Waa muhiim! Gawaarida waxaa lagu qalabeeyaa makiinada naaftada cusub. Waxay isticmaashaa qaboojinta biyaha iyo korontada gaaska korontada isla waqti isku mid ah.
Waxqabadka mashiinka sarreeya waxaa lagu gaari karaa iyadoo loo marayo dabeecadaha si fiican u habboon.
Qaabka MTZ tractors 892 wuxuu leeyahay sifooyinka guud ee farsamooyinka soo socda:
Dhererka 2 m 81 cm
Jaantuska 1 m 97 cm
Length 3 m 97 cm
Faafidda ugu yar 4.5 m
Awoodda korantada 65 faras
Isticmaalka shidaalka 225 g / kW saacaddiiba
Awoodda shidaalka 130 l
Cadaadiska carrada 140 kPa
Crankshaft wuxuu u rogaa xawaare 1800 rpm
Si aad u go'aamiso xulashada qalabka gaarka ah ee shaqada beerta ama beerta, waxaad u baahan tahay inaad isku xirto baahiyahaaga iyo dabeecadaha tareenada T-25, T-150, Kirovtsy K-700, Kirovtsy K-9000, MTZ-80, MTZ-82, tareenada yaryar, Neva motoblock oo ku lifaaqan, dhiirigelinta saladh, salaw baradho.
Miisaanka hoose ee MTZ-892 cagajuglaha, halka manevraada wanaagsan, awooda sare iyo awoodda loo leeyahay in lagu rakibo unugyada la rakibay ee ujeedooyin kala duwan ayaa mashiinkan ku habboon:
hawlgallada xamuulka iyo dejinta;
Marka lagu daro beeraha, waxaa si firfircoon loo isticmaalaa dhismaha.
Ma taqaanaa? Caankii ugu caansanaa ee xilligii dagaalka ka hor ayaa ahaa baabuurtii xamuulka SJTZ-15/30. Waqtigaas waxaa lagu soo saaray labo warshadood. Waxay lahayd awoodda ugu weyn uguna dedejisay xawaaraha 7.4 km / h.
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka cagafcagaca
In kasta oo xaqiiqda ah in Belarus 892 loo tixgeliyo mishiinka caalamiga ah, waxa uu leeyahay dhinacyo fiican iyo diidmo. Faa'iidada ayaa ah iskutallaabta wanaagsan iyo waqti isku mid ah awoodda xamuulka kuu ogolaato inaad ka shaqeyso goobaha qoyan.
Dhammaan arrintani waxay sabab u tahay maareynta fudud iyo maneuverability. Tani waxay sidoo kale ku jiri kartaa isticmaalka shidaal dhaqaale oo badan iyo helitaanka dhammaan qeybaha wax lagu kaydiyo.
Khasaaruhu waa kharashka iyo xaqiiqda ah in qalabka si aan fiicnayn u kicin karo shaqooyin badan oo badan. Waxaa intaa dheer, waxaa jira xaalado marka xilliga qaboobaha Dhibaatooyin ayaa ka jiray bilaabidda mishiinka.
Sida kor ku xusan, MTZ-892 waxay leedahay tayo fiican oo ka fiican kuwa xun, taasina waxa ay ka dhigeysaa mid aad u caan ah oo ku shaqeeya dhul beereed yar.